I-Deepsky Villa C- Karimunjawa - I-Airbnb
I-Deepsky Villa C- Karimunjawa
Igumbi lakho lokulala e indlu enevaranda sinombuki zindwendwe onguVenny
Indlu enevaranda yamaplanga eyenziwe ngeplanga eliqaqambileyo nenendawo entle yokubuka igadi kunye neenduli eziluhlaza njengendawo engasemva, ekwindawo ethe cwaka. Iikhilomitha eziyi-2 ukuya eSunset Beach, iikhilomitha eziyi-5 ukusuka kwizibuko eliphambili, neekhilomitha eziyi-12 ukusuka kwisikhululo seenqwelo-moya. Sikunika indawo entle yokuhlala ngexesha leholide eKarimunjawa Island. Ijikelezwe yindalo enoxolo. Sine- observatorium yokuqesha, kunye ne-2 Dobsons telescope, kunye nee-telecsopes ezi-2 kunye neengcaphephe.
Sine-viewatorium kwaye sakha ngaphakathi nge-2 telescope enezixhobo zokuvuselela, kunye nezixhobo ezi-2 zokujonga isibhakabhaka esinzulu esimnyama.
indawo yethu ikwisiqithi saseKarimunjawa. Iikhilomitha eziyi-1 ukuya eBukit Love (Love Hill), iikhilomitha eziyi-2 ukuya eSunset Beach.
Sihlala kwindawo efanayo yee-bungalows kwaye sinika ukutya neziselo, ezivulekileyo ngo-7 kusasa ukuya kutsho ngo-9 wasemva kwemini. Kwaye ungabuza nayiphi na imibuzo imini nobusuku. Sine-scooter yokuqesha.